Turkish lira na-agbada mgbe niile megide dollar US
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Turkey na -agbasa News » Turkish lira na-agbada mgbe niile megide dollar US
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • investments • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Turkey na -agbasa News
Turkish lira na-agbada mgbe niile ka dollar US.
N'ikpeazụ, ụlọ akụ etiti anaghị ewere mkpebi na amụma ego ego nke Turkey kama a na -ewere ya n'obí onye isi ala.
Turkish lira awụfuola pasenti iri abụọ n'afọ a na ọkara mbelata ego abatala kemgbe mbido ọnwa gara aga.
Onye kacha eme ihe n'ahịa na -apụta n'afọ a, ego ndị Turkey metụrụ ala 9.3350 megide dollar taa.
Societe Generale buru amụma mbelata isi 100 wee kwụsịtụ site na ụlọ akụ etiti ka lira na-agbago ruo 9.8 megide dollar site na njedebe afọ.
Onye na-eme ihe kacha njọ n'ahịa na-apụta n'afọ a, Turkish lira dara na nke kacha dị ala karịa dollar US taa.
Ego ndị Turkey metụrụ ala nke 9.3350 megide dollar tupu ha emee mfu ụfọdụ. Ọ kwụrụ na 9.31 na 18:22 GMT.
Ndị nyocha ego na -ahụ obere ezumike n'ihu maka ego mba Turkey nwere nsogbu, nyere ihe onye kpọrọ atụmanya nke ọmụrụ nwa na -enweghị isi na ngwụcha izu a.
Turkish lira awụfuola pasenti iri abụọ n'afọ a na ọkara mbelata ego abatala kemgbe mbido ọnwa gara aga, mgbe Central Bank nke Turkey malitere inye akara ngosi dovish n'agbanyeghị onu oriri na -arị elu ihe ruru pasent 20.
Ndị Turkey Onye isi ala Recep Tayyip Erdogan akpọọla oku ka ọ belata ego na mmetụta ya, gụnyere ngbanwe ngwa ngwa nke onye isi ụlọ akụ etiti, na -emebi ntụkwasị obi nke amụma n'afọ ndị na -adịbeghị anya.
Mgbe mbelata ọnụego ihe ruru otu narị n'ọnwa gara aga zigara lira na-akụda, ndị ọrụ akụ na ụba nke ụlọ ọrụ mgbasa ozi Reuters gbara ajụjụ ọnụ ma ụlọ akụ etiti ga-agbada site na isi 100 ma ọ bụ 50 ọzọ na nnọkọ amụma Thursday.
Ụfọdụ ndị na -ahụ maka akụ na ụba jụrụ ịzaghachi ntuli aka ahụ nyere etu ụlọ akụ etiti siri bụrụ ihe a na -atụghị anya ya, ọkachasị mgbe Erdogan chụpụrụ mmadụ atọ n'ime ndị otu kọmitii amụma ego (MPC) n'izu gara aga, gụnyere abụọ a hụrụ na -emegide mbelata ọnụego.
"N'ikpeazụ mkpebi ụlọ akụ etiti anaghịzi eme iwu maka ...
Mgbe ọ gbasasịrị ụlọ akụ etiti ọhụrụ ya, Erdogan "Ewepụla mmegide niile megide echiche ya na -akwadoghị na ọmụrụ nwa dị elu na -ebute mmụba dị elu", ndị nyocha SocGen dere na ndetu ndị ahịa.
N'agbanyeghị "enweghị ezi uche" nke mbelata ọnụego ugbu a, "enweghịzi ohere ịkọwa arụmụka akụ na ụba ọdịnala n'ịtụle omume [ụlọ akụ etiti] nwere ike ime," ka ha dere.